Adenomyose sy ny bevohoka
Ny adenomyose dia diagnostika izay midika fa ny fihanaky ny fatran'ny endometrialy ankoatra ny valanaretina uterine amin'ny fampidirana azy ao anaty rantsan-kavoana . Raha tsy izany, io aretina io dia antsoina hoe endometriozy anatiny - teny iray izay ren'ny vehivavy maro. Ny fihanaky ny aretina toy izany dia mety ho olana lehibe raha misy vehivavy mikasa ny ho tonga reny. Ny fahafaha-mihetsika amin'ny aretina dia mihena be, ary miteraka fandrahonana foana ny fizotry ny fitondrana. Ho takatsika ny adenomyosis mifanaraka amin'ny tranonjaza sy ny bevohoka.
Adenomyosis ny tranonjaza - ny antony sy ny soritr'aretina
Ny mahavariana ny fihavian'ny taolam-pandrenesan'ny tovovavy dia ny fahafahana mihalehibe eo ambanin'ny hormonina. Ilaina ny mahazo atody iray mangatsiaka, ny fampidirana azy eo amin'ny rindrin'ny tranonjaza sy ny fiandohan'ny vohoka. Ny endometrio izay mameno ny rindrin'ny tranonjaza anatiny ary rehefa tsy misy ny fitondrana vohoka, dia lavina ary mivoaka amin'ny vagao amin'ny endriky ny taova.
Raha, indraindray, ny sela endometrie dia miditra ao amin'ny lavaka tsy mety levona (vokatry ny fandidiana, ny trauma, ny fanesorana ny rà mandreny), dia afaka "hidina" any amin'ny taova hafa izy ireo, ka mahatonga ny fatran'ny dipoavatra. Ny antony mahatonga ny endometrium "hivoatra" any amin'ny rindrin'ny tranonjaza dia mbola tsy mazava tsara, fa ny endometriozy anatiny, amin'ny fisehoany sy ny vokany, dia tsy "tsara kokoa" noho ny ivelany.
Afaka bevohoka amin'ny adenomyosis ve aho?
Momba ny fanontaniana raha azo atao amin'ny adenomyosis raha bevohoka ny zaza, dia sarotra ny mamaly amin'ny fomba tsy miangatra. Amin'ny lafiny iray, adenomyose dia miteraka aretina amin'ny vehivavy eo amin'ny 40 - 80% amin'ny marary. Etsy an-danin'izany, na dia marary mafy aza ny fitsaboana amin'ny endometriozy dia mamaly tsara ny fitsaboana mahomby. Ny fitsaboana ny adenomyosis ny tranonjaza dia tsy azo atao mihitsy ny midika izany, mety ho bevohoka izy, na dia tsy miditra amin'ny fitsabahan'ny gynécologues aza.
Raha toa ka manomboka tonga ara-potoana ny fitsaboana mahomby, dia ho azo atao tsara kokoa ny bevohoka miaraka amin'ny adenomyosis, kanefa moa ve izany fanapahan-kevitra izany no hanohana azy amin'ny mpitsabo? Ny fampiroboroboana ny endometriosa ao anaty ao anatin'io fitondrana io dia matetika mitranga, saingy ny fahombiazan'ny fivoaran'ny aretina raha oharina amin'ny vokatry ny fitondran-tena ratsy dia mitovy. Noho izany, matetika ireo dokotera no misolo tena ny fitondrana vohoka, fa aorian'ny fanasitranana ny adenomyosis.
Adenomyose amin'ny fitondrana vohoka
Raha ao anatin'ny adenomyosis dia mitranga tampoka ny fitondrana vohoka na mandritra ny fitsaboana manokana, ny vehivavy dia tokony hiambina amim-pahamalinana. Ny hormonal ny hormona, ny fitomboan'ny asa mifandray amin'ny myometrium noho ny aretina ao amin'ny adenomyosis dia tsy manakana ny fomba hitemitra foana, fa saiky matetika no mety ho antony mety hampidi-doza.
Ny ezaka rehetra tokony atao dia ny mikendry ny hitazona ny maha-bevohoka azy, satria rehefa manilikilika dia misy ny fiverimberenan'ny adenomyosis, izay mihamitombo hatrany amin'ny endriny kokoa. Rehefa manomana ny fiterahana dia tokony ho raisina ao an-tsaina fa ao anatin'ireo vehivavy bevohoka miaraka amin'ny adenomyosis uterine dia mety ho tratran'ny aretina postpartum
Amin'ny fanarenana ny fadimbolana aorian'ny fiterahana dia havaozina ny soritr'aretin'ny adenomyosis, izay maty nandritra ny fitondrana vohoka, noho izany dia tsara kokoa ny fananana fitsaboana antiropractive mialoha, anisan'izany ny fampidirana fanafody hormonina, ny fanamafisana ny tsy fahampian'ny hery sy ny fepetra hafa omen'ny dokotera.
Tokony hiarovana azy amin'ny fananana vohoka tsy niriana koa izy mba hisorohana ny fanalan-jaza, satria ny fampihenana ny fanasitranana ny fitondrana vohoka no mahatonga ny fientanam-po ho an'ny fanombohana ny endometriozy. Tsara ihany koa ny manalavitra ny fitsaboana amin'ny tranonjaza mba hisorohana ny fiovan'ny adenomyosis amin'ny endrika endometriozy ivelany.
Magne B6 amin'ny fitondrana vohoka
Zvezdochka nandritra ny fitondrana vohoka
Ny tononkalo fahatelo fahatelo
Fifandirana diso - soritr'aretina
Volana nafindra tao amin'ny fitondrana vohoka
"Girl in the train": lahatsary avy amin'ny famolavolana sarimihetsika tsara indrindra
Ny fitsaboana ny holatra nailikilika - ny fomba tsara indrindra hanesorana ny onychomycosis
Karazan'akanjo fohy - inona no androany amin'ny fironana sy ny zavatra tokony harahina?
Slipones - inona ity?
Ny vaksinina amin'ny tsetsatsetsa
Ny Supermodel Natalya Vodyanova dia nanjary toy ny "Lila"
Asa atao am-bohoka - inona io?
Puff pastry - ny sakafo mahandro haingana indrindra ho an'ny tsindrin-trano
25 aretina tsy mahazatra izay tsy azo hazavaina amin'ny siansa
Mofomamy amin'ny sakafo mahasalama - 9 mahasalama sy mahazatra